कृ गर्ल हट अदितीले किन गरिन् गोप्य प्रेसमिट ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
कृ गर्ल हट अदितीले किन गरिन् गोप्य प्रेसमिट ?
फिल्मी फण्डा । यो बर्षको सर्वाधिक अपेक्षा गरिएको फिल्म कृ की नायिका अदिती बुदाथोकीले राजनैतिक दलले गुटगत भेला गरे जस्तै गोप्य पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ । आईतवार राजधानीमा अदितीले गोप्य प्रेसमिट गरिएको हो । फिल्म कृ को नायिकाको हैसियतले गरेको प्रेसमिटमा फिल्म कृ बाट उनी स्वंयम बाहेक अरु कुनै पनि टिम या क्रु उपस्थित थिएनन् ।
बुझिए अनुसार अदिती अनमोल केसीको छायाँमा परेपछि आफ्नो प्रचारको लागि प्रेसमिट गरिएको हो । यदि यसो हो भने अदितीले ठूलै गल्ति गरेको बुझ्न सकिन्छ । फिल्मको सबै प्रचार सामाग्रीमा उनलाई स्थान दिईएको छ । फिल्मको कार्यक्रममा सहभागी गराईएको छ । यसो हुँदा हुदै अनमोलको छायाँमा परेको महशुस गर्दै यस्तो कार्यक्रम गर्नुले घमण्डपन प्रस्तुत गरेको भान हुन्छ । फिल्म ड्रिम्स चल्नुपूर्व नायिका साम्राज्ञी पनि अनमोलकै छायाँमा थियो तर फिल्म चलेपछि अनमोलकै हाराहारिमा उनी चर्चित भए ।
त्यो उनको धैर्यता र कामको कारणले भएको थियो । तर अदितीले त्यो धैर्यता राख्न सकेन । संसारमा हरेक मानिसको ईच्छा फरक–फरक हुन्छ । मलाई फलानो मान्छेसँग काम गर्नु छ भन्दैमा पुरा हुने हैन । त्यस्तै ईच्छा अदितीले राखेकी छिन् । त्यो उनको ईच्छा फिल्म कृ ले मात्रै पुरा गरिदिन सक्नेछ । यदि कृ मा उनको कामबाट दर्शक सन्तुष्ट हुन सकेन या उनको कामको खासै चर्चा भएन भने उहि ड्रिम्समा केमियो नायिका सन्ध्या केसी जस्तै हुनेछिन् । यसरी सन्ध्याले आफुलाई चिनाउन छुट्टै प्रेसमिट गर्नुको साटो अनमोलसँगै रहेर आफ्नो कामको प्रचार गरेको भए राम्रो हुन्थ्योकी ? फिल्म रिलिजसम्म धैर्यता राखेको भए हुन्थ्योकी ?